भुपेन्द्रलाई कसरी र किन मा’रि’यो ? को हुन नवीन रावल ? आमाबुबाले रुँदै सुनाए काहानी (भिडियो सहित) – 24updatemedia
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा निकै त’ह’ल्का पिटिरहेको घटना हो टिकापुरमा भएको भुपेन्द्र कटुवालको हत्याको घटना । घटना घटेको आज १७ दिन बितिसक्दा पनि यस घटनाबारे बास्तबिकता र सत्यतथ्य पत्ता लाग्न सकिरहेको अबस्था छैन । भाइटिकाको तिनदिनपछि कार्तिक २३ गते ह’त्या गरिएका भुपेन्द्र मात्र २३ बर्षका थिए । यो घटना दिनप्रतिदिन झन रहस्यमय बन्दै गएको छ । यसै घटनाको विषयमा जानकारी दिदै आफ्नो ब्य’था सुनाउन आज भुपेन्द्रका बाबू आमा मिडियासामु आएका छ्न ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई हेर्ने हो भने हत्यामा नवीन रावल नाम गरेका एक ब्यक्ति र उनको समुहको संलग्नता प्रष्ट देखिन्छ । नवीन रावललाइ भुपेन्द्रले मामा भनी सम्बोधन गर्ने गरेको कुरा पनि बाहिरिएको छ । भुपेन्द्र अमेरिका जाने तयारिमा थिए । भुपेन्द्रका परिवारले भने अनुसार नवीन भुपेन्द्रलाइ आफ्नो समुहमा सामेल गराउन चाह्न्थे तर सोही कुरा भुपेन्द्रले नमान्दा यतिबेला भुपेन्द्रको ह’त्या गरिएको दाबी गरिएको छ ।
कपिल श्रेष्ठ नाम गरेका भुपेन्द्रका साथिले आफु खतरा रहेको र आफ्नो पछाडी केही ब्यक्तिको समूहले आफुलाइ लखेटेको भन्दै भुपेन्द्रलाई उनले बारम्बार फोन गरिरहेका थिए । त्यतिबेला साझको झण्डै ६ बजेको थियो । कपिलले फोन गरेर बोलाएपछी भुपेन्द्रको साथमा दिपेश न्यौपाने नाम गरेका उनका भाइ पनि उनिसगै गएका थिए । भुपेन्द्रलाइ निरन्तर फोन गरेर बोलाइरहदा कपिल भने टिकापुरमा लु’के’र बसिरहेका रहेछ्न ।
त्यतिनै बेला भुपेन्द्रको बाइकमा तेल सकिएको थियो तर कपिलले साथिको लागि जाबो एउटा तेल हालेर आउन सक्दैनस भनेपछी साथिको वचन टाल्न सकेनन भुपेन्द्रले । हु’इ’के उनी साथी भए ठाउ तर बिचरा उनलाइ के थाहा कि आफ्नै साथिले उनलाइ मार्ने ष’ड्य’न्त्र रचिरहेको छ भनेर । कपिलले बोलाएको लोकेसन पत्ता लाग्न सकेन । लोकेसन खोज्दै जादा उनिहरुमाथी यस्तो बि’प’त आइलाग्यो कि त्यसैबखत ठिक अगाडि नबिनका केटाहरु भेट्टिए र उनिहरु भुपेन्द्रको बाइकको पिछा गर्न थालेछ्न ।
केही अगाडी पुगेपछि भुपेन्द्रले दिपेशलाइ सिद्धार्थ होटलअगाडि आफ्नो मामाको घर रहेको भन्दै त्यही रोक्न लगाएछ्न । बाइक उनले भनेकै ठाउमा रो’कि’यो र जब उनी गेटबाटभित्र छिर्न मात्र के आटेका थिए उनी माथी एकाएक आ’क्र’म’ण हुनथाल्यो, उनिमाथी धा’रि’लो ह’ति’या’र प्र’हा’र हुनथाल्यो । ब’चा’उ ब’चा’उ भन्दै चि’ल्ला’इ’र’हे’का भुपेन्द्रलाइ बचाउने त्यहा कोहि भएनन, सगै गएका दिपेश पनि आफ्नो ज्या’न बचाउन झ’डिभित्र लु’के । ज्यानै जाने गरि भुपेन्द्रको नि’र्घा’त रुपमा कु’ट’पि’ट गरि भुपेन्द्रको ज्या”न लिइयो ।
एक्लो छोरो गु’मा’उ’नुको पी’डा त छ्दैछ साथमा छोरोको ह’त्या’राको पत्तो नलाग्दा र सजाय नमिल्दा बाबुआमा भने मर्नु न बाच्नुको दो’धा’रमा छ्न । रातमा नि’न्द्रा न दि’नमा भो’क भएका छ्न उनिहरु । क’ठै ब’रा था’म्न सकिनन आमाले मन रु’दै यसो भनिन “त्यही फोटो हेरेर आज कति दिन भयो हामी सुतेकै छैनौ, हामी बस्छौ बाबु आउँछ कि भनेर कहिले यता हेर्छौ त कहिले उता ।” आमा आमा भनेर आउथ्यो बोलाउथ्यो अहिले त यत्तिका दिन भैसक्यो सपनामा पनि आको छैन भन्दै भ’क्का’नि’न्छी’न उनी ।
छोरोको लुगा कतिदिनसम्म तकिया बनाएर सुते तर छोरो आएन भन्छिन उनी । छोराको आत्माले शान्ती पनि नपाउने भयो भन्छिन उनी । नन्दु सरकारकोमा आउछस कि तेरो परिवारलाइ मा”र्दि”म भनेर ध”म्की दिइएको रहेछ उनलाइ । सम्पती देखेर नै मेरो छोरालाइ समुहमा आबद्ध गर्न खोजेको बताउछिन उनी । यस्तो सम्म भनिन आमाले “मेरो छोरालाइ जहाँ मा”रे”को छ त्यसै ठाउमा नवीन रावल सहित अरु ४ ५ जना जो यो ह”त्यामा संलग्न छ्न उनिहरुको चिता त्यसै ठाउमा ज”ले”र आ”गोको सासको धु”वा मेरो साससम्म पुग्यो भने मात्र म र मेरो छोराले शान्ती पाउछ ।”
Previous अनिता खड्कालाइ भेटन गएका कान्छी सिरियलका सन्तोष सर भ’क्कानिएर रो’ए, यति ठुलो सहयोग गरे, छोरीको अभिनयले अ’चम्मित परे
Next काे’राेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ‘मिक्रोन’ भेटिएपछि मंगलवारदेखि मास्क अनिवार्य